Yey yihiin, maxaase ka naqaan lixda Senator ee la doortay? - Caasimada Online
Home Warar Yey yihiin, maxaase ka naqaan lixda Senator ee la doortay?
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa maanta lagu doortay Lix Senator oo kamid ah xubnaha maamulkaas ku metelaya Aqalka Sare ee baarlamanka ee 11-aad ee Soomaaliya.
3- Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer – Dhagdheer oo kasoo jeeda beesha Murusade, waxa uu ahaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, wuxuuna xiligaan lagu tiriyaa inuu kamid yahay kooxda Waayo-arag.
Sidoo kale waxaa lagu tiriyaa inay ka tirsan tahay kooxda Waayo-arag ee madaxweyne Qoor Qoor, waxayna maanta ku guuleystay kursiga lixaad ee maamulkaas ee Aqalka Sare, kadib markii ay u tanaasushay Qadro Abdullahi Isxaaq.